ရန်ကုန်နားမကြားသော ကလေးများကျောင်း | SSDSW
လူမှုဝန်ထမ်း၊ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စု ဝန်ကြီး၏ လမ်းညွှန်မှုဖြင့် လူမှုဝန်ထမ်း ဦးစီးဌာနမှ နားမကြားသောကလေးများကျောင်းအား မြို့တော်ရန်ကုန်တွင်လည်း တစ်ကျောင်းဖွင့်လှစ်ရန် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ခဲ့ရာ ၂၀၁၄-ခုနှစ်၊ ဇွန်လ(၉)ရက်နေ့တွင် နားမကြားသောကလေးများကျောင်း၊ရန်ကုန်အား ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါ သည်။
ကျောင်းဖွင့်ရခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်များမှာ -
(က)	နားမကြားသောကလေးများအား ကာယ၊ ဉာဏ၊ စာရိတ္တ ဘက်စုံဖွံ့ဖြိုးစေရန်၊
(ခ)	နားမကြားသောကလေးများအား ဉာဏ်ရည်နှင့် ၀ါသနာထုံမှုအပေါ်မူတည်၍ ကျောင်းတွင်းပညာရေးနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပညာရပ်များ သင်ကြား ပေးရန်၊
(ဂ)	လူမှုဘ၀ပတ်ဝန်းကျင်တွင် လိုက်လျောညီထွေနေထိုင်တတ်စေရန်၊
(ဃ)	သင်ကြားတတ်မြောက်ထားသောပညာရပ်များဖြင့် မိမိဘ၀မိမိ ရပ်တည်ထူထောင် နိုင်ပြီး အခြားသူများအပေါ်မှီခိုစိတ်များ လျော့နည်းစေရန်၊
(င)	အခြေခံပညာကျောင်းများသို့ တက်ရောက်နိုင်သော ကလေးများအား ပညာ ဆက်လက် သင်ယူနိုင်အောင် ဆောင်ရွက်ပေးရန်
အသက်(၆)နှစ်မှ (၁၈)နှစ်အတွင်း ကျန်းမာသန်စွမ်းသည့် နားမကြား သောကလေးများကို လူမျိုး၊ ဘာသာ၊ ကျား/မ မရွေး လက်ခံပါသည်။ သွားလာရေးခက်ခဲသည့် ကျောင်းသား/ သူများအတွက် အဆောင်နေ (ဘော်ဒါ) ကျောင်းသား အဖြစ် လက်ခံပါသည်။
ကျောင်းသားများ လက်ခံရာတွင် အောက်ပါအချက်အလက်များ ယူဆောင်လာရမည်ဖြစ်ပြီး မိဘများ ကိုယ်တိုင် လာရောက်အပ်နှံရမည်ဖြစ်သည် -
(၁)	ကလေး၏ ပတ်(စ်)ပို့ ဓါတ်ပုံ (၄)ပုံ၊
(၂)	ကလေး၏ မွေးစာရင်း မူရင်း နှင့် မိတ္တူ
(၃)	အိမ်ထောင်စုဇယား မူရင်း နှင့် မိတ္တူ
(၄)	မိဘ(၂)ဦး (သို့) အုပ်ထိန်းသူ မှတ်ပုံတင် မူရင်း နှင့် မိတ္တူ
(၅)	သက်ဆိုင်ရာ ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံး၏ ထောက်ခံချက်
(၆)	သက်ဆိုင်ရာ မြို့နယ်ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာန၏ ကျန်းမာရေးကောင်း မွန်ကြောင်း၊ ကူးစက်ရောဂါ ကင်းရှင်းကြောင်း ထောက်ခံချက်၊
(၇)	အကြားအာရုံချို့ယွင်းမှု တိုင်းတာစစ်ဆေးပြီးသည့် နားကြားနှုန်း (db)စစ်ဆေးချက် စာရွက်စာတမ်း စသည့် အချက်အလက်များနှင့် အတူ ယူဆောင်လာရမည် ဖြစ်ပြီး မိဘ(သို့)အုပ်ထိန်းသူကိုယ်တိုင် လာရောက်အပ်နှံ ရပါမည်။
(၈)	ပညာသင်နှစ်အလိုက် နှစ်စဉ် အပ်နှံရမည်ဖြစ်ပြီး နွေရာသီကျောင်း ပိတ်ရက်တွင် မိဘများမှ ပြန်လည်လာရောက် ခေါ်ယူရမည် ဖြစ်ပါသည်။
ခွင့်ပြုကျောင်းသားအင်အားမှာ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ပညာသင်နှစ်မှ စ၍ (၁၀၀)ဦးဖြစ်ပြီး၊ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပညာသင်နှစ်အတွက် လက်ခံစောင့်ရှောက် သင်ကြားပေးခဲ့သော ကျောင်းသား/ ကျောင်းသူ အမျိုးအစားများမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည်။
၁။	အဆောင်နေကျောင်းသား - ကျား(၅၀) ၊ မ(၃၄) = ပေါင်း(၈၄)
၂။	နေ့ကျောင်းသား - ကျား(၂၀) ၊ မ(၁၉) = ပေါင်း(၃၉)
စုစုပေါင်း - ကျား(၇၀) ၊ မ(၅၃) = ပေါင်း(၁၂၃)
အဆောင်နေကျောင်းသား/သူများအား တစ်နေ့လျှင် (၃)ကြိမ်၊ကလေးတစ်ဦးလျှင် နိုင်ငံတော်(MD)မှ ၁၀၀၀ိ/-နေ့စဉ်ကျွေးမွေးလျှက် ရှိပါသည်။သီးခြားအလှူရှင်များ ကျွေးမွေး လှူဒါန်း လိုပါကလည်း ကျောင်းမှ လက်ခံစီစဉ် ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပါသည်။
မြန်မာလက်သင်္ကေတ(MyanmarSignLanguage)၊ လက်စာလုံးပေါင်း(Finger Spelling)၊
နှုတ်ဖတ် စကားပြောခြင်း (Lip Reading)၊
အသံထွက်‌‌လေ့ကျင့်ခြင်း (Speech Training)တို့ကို အသုံးပြုပြီး လေ့ကျင့် သင်ကြား ပေးလျက် ရှိပါသည်။
အ‌ခြေခံပညာမူလတန်းအဆင့်မှ စတုတ္ထတန်းအထိ ကျောင်းသား/သူ များကို နားမကြားသောကလေး များကျောင်း၊ရန်ကုန်တွင် လက်ခံသင်ကြားပေးလျက် ရှိပြီး ပဉ္စမတန်းမှ ဒသမတန်းအထိ ကျောင်းသား/သူများအား လူတိုင်း အကျုံးဝင် ပညာရေး အစီအစဉ်အရ အခြေခံပညာကျောင်းများသို့ တက်ရောက်သင်ကြား နိုင်ရေးကို ဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါသည်။
နားမကြားသောကလေးများအား အကြိုသက်မွေးပညာရပ်များ ဖြစ်သည့်
(၄)	ပန်းချီ စသည့် ပညာရပ်များအား သင်ကြားပေးလျက် ရှိပါသည်။
ကျောင်းတွင်း ဆေးပေးခန်းထားရှိပြီး ဌာနတွင်း တာဝန်ခံဆရာဝန်မှ အပတ်စဉ် လာရောက် စစ်ဆေးပေးလျက်ရှိပြီး၊ လိုအပ်လာပါက မြို့နယ်ဒေသန္တရ ဆေးပေးခန်းနှင့် အထွေထွေ ရောဂါကု ဆေးရုံကြီးသို့ ချိတ်ဆက်ကုသမှုများ ဆောင်ရွက်ပေးလျက် ရှိပါသည်။
အားကစားလှုပ်ရှားမှု အနေဖြင့် ကျောင်းတွင်းကာယစွမ်းရည်ပြိုင်ပွဲ ကျင်းပပြုလုပ်ပြီး အားကစားနည်းများ ဖြစ်သော ကြက်တောင်ရိုက် ၊အပြေး၊အာလူးကောက်၊အင်္ကျီဝတ် စသည့် အားကစားနည်းများ လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးပါသည်။ နှစ်စဉ် မသန်စွမ်း အားကစားပြိုင်ပွဲ၊ ပန်းချီ ပြိုင်ပွဲ၊ အကပြိုင်ပွဲ စသည်တို့တွင် ၀င်ရောက် ယှဉ်ပြိုင်လျက်ရှိပါသည်။
နေ့စဉ်နံနက်ပိုင်း စု‌ဝေးချိန်တွင် ကျောင်းအုပ်နှင့် တာဝန်မှူး များမှ လိမ္မာရေးခြား ရှိစေရေးအတွက် မှာကြားပေးလျက်ရှိပြီး၊ ညပိုင်းဘုရား ရှိခိုးချိန်တွင်လည်း ငါးပါသီလ၏ အကျိုးနှင့် ဆန့်ကျင်ဘက်အပြစ်များကို ရှင်းလင်း ပြောကြားပြီး စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဖွံ့ဖြိုးရန်နှင့် စိတ်တည်ငြိမ်မှု ရရှိစေရန် လေ့ကျင့် ပေးပါ သည်။
ကျောင်းသားများ အပန်းဖြေပျော်ရွှင်ရေး အနေဖြင့် နေ့စဉ် MRTV, MWD, MRTV-4 အစီအစဉ်များ ပြသပေးခြင်း၊ စနေ၊ တနင်္ဂနွေနေ့များတွင် Videos, Sky Net အစီအစဉ်များ ပြသပေးခြင်း၊ ရာသီ ပွဲတော်များကျင်းပပေးခြင်း၊ အခါအားလျော်စွာ ပြင်ပ လေ့လာရေး အစီအစဉ် များကိုလည်း ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပါသည်။
(၁) အသံပိုင်းဆိုင်ရာ နည်းပညာ(Audiology)
နားမကြားသောကလေးများကျောင်းအနေဖြင့် နားမကြားသောကလေးများအား မိမိ ပတ်ဝန်းကျင်၊ မိမိဘဝ မိမိရပ်တည် ထူထောင်နိုင်ပြီး အခြားသူများအပေါ် မှီခိုခြင်းများ လျော့နည်း စေရန်အတွက် အသံပိုင်းဆိုင်ရာ နည်းပညာ(Audiology)ဖြင့် နားအကြားအာရုံ တိုင်းတာခြင်းနှင့် နားအကြားအာရုံရှိသော ကလေးများအား နားကြားကိရိယာ တပ်ဆင်နိုင်ရန် နားကြားကိရိယာကို အသံညှိ တပ်ဆင်သည့် နည်းပညာများဖြင့် ပံ့ပိုးပေးနိုင်ရေး စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးလျက် ရှိပါသည်။
(၂) လက်သင်္ကေတပြ ဘာသာစကား ကူညီပံ့ပိုးသူများသင်တန်း
လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာနမှ၊ နိုင်ငံတော်အခမ်းအနားများ ၊မသန်စွမ်းအခမ်းအနားများနှင့် TVသတင်းအစီအစဉ်များတွင် နားမကြားသူများပါ သတင်းအချက်အလက်များ ရရှိနိုင်ရေး အတွက် လက်သင်္ကေတပြဘာသာပြန်ဝန်ဆောင်မှုများ အဆင်ပြေစွာဖြင့် ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ရန် ၂၀၁၄ခုနှစ်မှ ၂၀၁၈ခုနှစ်အထိ လက်သင်္ကေတပြ ဘာသာစကား ကူညီပံ့ပိုးသူများသင်တန်းကို ဖွင့်လှစ်‌ပေးလျက် ရှိပါသည်။
နားမကြားသူများ လူ့အသိုင်းအဝိုင်းအတွင်း ဝင်ဆန့်နိုင်ရေးအတွက် ပြည်သူလူထုအတွင်း အသိပညာပေးအစီအစဉ်များကို ပြည်နယ်နှင့် တိုင်းဒေသကြီးအသီးသီးသို့ ကွင်းဆင်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။နားအကြားအာရုံ လုံးဝမရရှိသောသူများအတွက် အထူးဝန်ဆောင်မှု ပေးခြင်းဖြစ်ပါသည်။
Account Name » SSDSW
Account Number » 0123456789
Bank » KBZ/AYA/CB
အမှတ် (၃၄,FG)၊ အိုးစု(၃)လမ်း၊
● စစ်ကိုင်း မျက်မမြင်ကျောင်း
● မန္တလေးမသန်စွမ်း သက်ငယ်သင်တန်းကျောင်း
● မန္တလေးနားမကြားသော ကလေးများကျောင်း
● မသန်စွမ်း သက်ကြီးသင်တန်းကျောင်း
● မသန်စွမ်းကလေးများ ပြုစုစောင့်ရှောက်ရေးဂေဟာ
● ရန်ကုန်မသန်စွမ်း သက်ငယ်သင်တန်းကျောင်း
● ကြည့်မြင်တိုင် မျက်မမြင်ကျောင်း
The Department of Social Welfare (DSW) is performing as focal Department in providing Social Welfare Services for those who are facing with social problems.
Building 17, Room 602, 5th Floor, MICT Park, Hlaing T/S, Yangon.
© 2021 SSDSW. All Rights Reserved. Developed by World Wide Myanmar